निर्वाचन अपडेट Archives - Naya Patrika
नयाँ पत्रिका भक्तपुर वाम गठबन्धनका उम्मेदवार महेश वस्नेत विजयी भएका छन् । उनले ३६ हजार ४१२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । भने उनको निकटतम प्रतिद्धन्दीका रुपमा कांग्रेसका दमनथान ढुंगाना रहे । उनले १८ हजार ६८७ मत ल्याएर पराजित भए । एमालेका उम्मेदवार बस्नेत पूर्वउद्योगमन्त्री हुन् भने ढंगाना पूर्वसभामुख हुन् । भक्तपुर प्रतिनिधिसभा...
लक्ष्मी काफ्ले झापा सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली गृहजिल्ला झापा पुग्दा केही अनौठा दृश्य देखिए । ओली सर्वाधिक मतसहित आइतबार दिउँसो विजयी भए पनि प्रमाणपत्र लिन भने सोमबार मात्र झापा पुगे । त्यो पनि हवाइजहाज नै चार्टर गरेर । अध्यक्ष ओली आफ्नी पत्नी, नेता अग्नी खरेल, कलाकारहरु राजेश घतानी र विल्सनविक्रम राईलगायतको...
मनिष खड्का रुकुम(पश्चिम), २५ मंसिर रुकुम पश्चिममा समानुपातिकमा पनि माओवादी पहिलो भएको छ । गत मंसिर १० गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ प्रतिस्प्रधामा दोश्रो भएको कांग्रेस भन्दा माओवादी केन्द्रले दोब्बर मत पाएको छ । समानुपातिक तर्फको अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभामा ४४ दलले मत पाएका छन् । जसमा सबैभन्दा...
राजकुमार गोले काभ्रे, २५ मंसिर काभ्रेको दुई प्रतिनिधिसभा र ४ वटा प्रदेशसभा तर्फ बाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यो सँगै काभ्रे जिल्लामा बाम गठबन्धनले क्लिनस्विप गरेका छन् । कसले कत्ति मत ल्याएर विजय भए ? प्रतिनिधि सभा १ गंगा बहादुर दोङ (माओवादि केन्द्र) ४३६३१ विजयी तिर्थ लामा ( कांग्रेस) ३९६०५ उपविजेता प्रदेश सभा...
मतगणना स्थलमा राजपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप
जनार्जन खत्री सर्लाही, २५ मंसिर सर्लाही क्षेत्र न. ४ को मतगणना स्थल सर्लाही क्याम्पस मलंगवामा राजपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच ढुंगा हानाहान हुँदा केही घाईते भएका छन् । झडपमा ३५ वर्षका कपलेश्वर मण्डल र ५० वर्षका सुरेन्द्र सिंहलगायत अन्य केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन केही...
कुन प्रदेशमा कांग्रेसले कति जित्यो ?
रमेश सापकोटा काठमाडौं, २५ मंसिर १५३ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले २१ ठाउँमा मात्र जित हात पारेको छ । मतगणना भइरहेका सुनसरी ३, कन्चनपुर ३, सर्लाहीमा अमरेशकुमार सिंह, स्याङजामा गोपालमान श्रेष्ठ र राजु थापाले नजिते कांग्रेस २१ भन्दा माथि नचढ्ने देखिएको छ । मतगणनामा सुनसरी, कन्चनपुर र सर्लाही २ भने कांग्रेस थोरै मतले पछि छ ।...
कांग्रेसकाे गढ भत्काए लगत्तै वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताले देखाए यस्तो हर्कत !
उपेन्द्र खनाल तनहुँ, २५ मंसिर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए लगत्तै वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताले ज्यादती सुरु गरेका छन् । तनहुँको क्षेत्र नम्बर २ स्थित भिमाद नगरपालिका पुरानो बजार निवासी कांग्रेसका पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि धु्रव कुमार श्रेष्ठका छोरा राजु श्रेष्ठलाई आइतबार साँझ घर आँगनमै हतियार प्रयोग गरी गम्भिर घाइते बनाएका छन् । तनहुँको दमौलीमा...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २५ मंसिर चुनावकै मुखमा पुत्र गुमाएका प्रचण्ड परिवारले निर्वाचनमा मिलेकाे पारिवारीक जितमा पनि हास्न सकेनन् । चितवनकाे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारी मतले विजयी भए भने कञ्चनपुरबाट बुहारी बिनाले दोब्बर मतले जित हात पारिन् । दाहाल परिवारमा मिलेको यो सफलताले फेरी एक पटक पारिवारमा सन्नाटा छायाे । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिस्पर्धी...
अपडेट : अर्घाखाँचीमा १२ हजार मतले टोपबहादुर अगाडि
नबिन केसी अर्घाखाँची, २५ मंसिर अर्घाखाँचीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना कार्य जारी छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार वाम गठबन्धनले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनका टोपबहादुर रायमाझी कांग्रेसका डा. राम बहादुर विसी भन्दा १२१८६ मतले अघि छन् । यसैगरी प्रदेश ‘क’ र प्रदेश ‘ख’मा पनि एमाले नै अघि छ । यहाँ वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा...
वामका धामीसँग ८ हजार बढी मतान्तरले पूर्वमन्त्री साउद पराजित
मोहन विष्ट कञ्चनपुर पूर्व सिँचाईमन्त्री एनपी साउदलाई ८ हजार बढी मतको अन्तरले पराजित भए । उनलाई वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नरबहादुर धामीले पराजित गरेका हुन् । धामीले ८ हजार ३२७ मतको अन्तरले उनलाई पराजित गरेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अधिकृतको कार्यालयका अनुसार धामीले २४ हजार ८९३ र साउदले ३३ हजार २२० मत...
दीपेन्द्र अधिकारी चितवन, २५ मंसिर चितवनको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विजयी भएका छन् । भरखसै सकिएको मतगणनाको परिणामअनुसार प्रचण्डले प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का उम्मेदवार विक्रम पाण्डेलाई ९ हजार ३ सय २७ मतले पराजित गरेका हुन् । प्रचण्डले ४८ हजार २ सय ७६ मत प्राप्त गरे भने पाण्डेले ३८...
स्याङजामा पनि वामपन्थी कै अग्रता
राेहितराज पराजुली स्याङजा दलहरुको लामो रस्साकस्सी साम्य भएपछि मत गणना कार्य सुरु भएको स्याङजाको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । वाम गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवारले एक अर्काले वुथ कब्जामा लिएर फर्जी मत खसालेको आरोप एक अर्कालाई लगाउदै आएका थिए । अहिले दुवै प्रतिनिधिसभा तर्फ वामगठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् । प्रारम्भिक मत...
शुरोजंग पाण्डे काठमाडौं, २५ मंसिर निर्वाचन परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ? मैले यसलाई अनपेक्षित रूपमा लिएको छु । यो कसरी भयो भन्ने विषयमा पहिला सबै मूल्यांकन गरेर, तथ्य–प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ला भन्ने लागेको छ । हराउन पार्टीबाटै षड्यन्त्र भएको छ भन्ने लागेर प्रमाण जुटाउन लाग्नुभएको हो ? प्रशस्तै षड्यन्त्र भएको पाइएको छ । त्यसैले प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएको...
अन्तर्घातको सिकार भएँ : पौडेल
रमेश सापकोटा काठमाडौं, २५ मंसिर २६ वर्षदेखि कुनै पनि निर्वाचनमा पराजय नबोहोरेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल यसपटक पराजित भएका छन् । तनहुँ १ बाट वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग उनी ६ हजार ८०२ मतले पराजित भएका हुन् । पौडेलले २७ हजार ६९० र श्रेष्ठले ३४ हजार ४९२ मत प्राप्त गरे । विगतका निर्वाचनमा प्रायः...
अपडेट : अर्घाखाँचीमा वाम गठबन्धनको अग्रता फराकिलो हुँदै (परिणाम सहित)
नबिन केसी अर्घाखाँची, २५ मंसिर अर्घाखाँचीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना कार्य जारी छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार वाम गठबन्धनले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनका टोपबहादुर रायमाझी कांग्रेसका डा. राम बहादुर विसी भन्दा अघि छन् । यसैगरी प्रदेश 'क' र प्रदेश 'ख'मा पनि एमाले नै अघि छ । यहाँ वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा माओवादीलाई र...
मोहन विष्ट कञ्चनपुर, २५ मंसिर कञ्चनपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार बिना मगर निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बर मतान्तरले विजयी भएकी छन् । बिना मगरले ३८ हजार ४ सय ६७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार दिवानसिंह विष्टले १९ हजार २ सय १९ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । बिनाले दिवानभन्दा...
काठमाडौंका मतदाता सधैँ ‘लभ एन्ड हेट’को स्थितिमा
टेकराज थामी काठमाडौं, २५ मंसिर ०४८ देखि ०७४ सम्मको निर्वाचन विश्लेषण - काठमाडौंका मतदाता सधैँ अस्थिर देखिएका छन् । ०४८ देखि ०७४ सम्मको आमनिर्वाचनको मतपरिणामको विश्लेषण गर्दा मतदाताले आफ्नो मतमार्फत राजनीतिक दलप्रति ‘हेट एन्ड लभ’को स्थिति देखाएका छन् । सोही कारण काठमाडौंमा राजनीतिक दल ‘क्लिनस्विप’ र ठूलो हुने दुवै क्रमबाट गुज्रिएका देखिन्छन् । माओवादी दुईपटक,...
निर्वाचनबारे बोलेनन् भारत र चीन
पर्शुराम काफ्ले काठमाडौं, २५ मंसिर विगतमा निर्वाचन भएलगत्तै स्वागत गर्ने छिमेकी भारत र चीन प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मौन छन् । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र जापानले निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा स्वच्छ रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । भारतले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने भएको छ । ‘अहिले हतारमा हामी...
अर्घाखाँचीमा पुन: मतदान गरेपनि वाम गठबन्धनकै बर्चश्व (परिणाम सहित)
नबिन केसी अर्घाखाँची, २५ मंसिर अर्घाखाँचीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतगणना कार्य जारी छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार वाम गठबन्धन अगाडि देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा १) टोप बहादुर रायमाझी (वाम गठबन्धन) ३४९३८ २) डा . राम बहादुर विसी. (नेपाली काङ्ग्रेस) २४०३५ ३) छन्द बहादुर पन्थी (नयाँ शक्ति) ४७४ ४) भोजराज दमासे (हलो ) १३२ ५)...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २५ मंसिर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ४६ जिल्लामा एक स्थान पनि विजयी हासिल गर्न सकेन । यी जिल्लामा कांग्रेसको नतिजा शून्य भएको छ । प्रदेश १ ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, इलाम, झापा, खोटाङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा प्रदेश ३ दोलखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, धादिङ र मकवानपुर प्रदेश ४ गोरखा,...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २५ मंसिर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू पराजित भए पनि वाम गठबन्धनको सानदार विजयबाट अत्यन्त खुसी भएको बताएका छन् । ‘मैले सधैँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण र वाम गठबन्धनको पक्षमा प्रयत्न गरिरहेँ, व्यक्तिगत रूपमा मेरो पराजय भए पनि वाम गठबन्धनको सानदार विजयबाट म अत्यन्त खुसी छु । मेरा लागि यो नै...
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २५ मंसिर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रैको अन्तर्घातका कारण आफू पराजित भएको बताएका छन् । अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्नुका साथै देशभर पार्टीको हारको कारण र यसको निदान खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘निर्वाचनको समग्र नतिजा कांगेसका लागि दुःखद रह्यो । यसले कांग्रेसलाई पक्कै राम्रो गरेको छैन । यो नतिजा देशकै लागि पनि राम्रो होइन...
शुरोजंग पाण्डे काठमाडौं, २५ मंसिर एमाले र कांग्रेसका दुई वरिष्ठ नेता आफ्नो हारको कारण पार्टीभित्र खोज्दै - वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत जित्ने संकेत देखिएका वेला एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने पराजित भएका छन् । निर्वाचन परिणामलगत्तै आफूमाथि अन्तर्घात भएको प्रस्ट संकेत गर्दै उनले तथ्य–प्रमाण जुटिसकेपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताए । गौतम बर्दिया–१ मा...
विश्वराज पछल्डङ्ग्या बाँके बाँकेमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार बाँकेको ३ क्षेत्र मध्ये २ वटा क्षेत्रमा वाम गठबन्धन र एक क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमले जितेको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ मा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज (अथक) विजयी भएका...
मोरङमा १८ सिटको मतगणना सम्पन्न : क-कसले जीते ?
गणेश लम्साल विराटनगर मोरङमा ६ वटा प्रतिनिधिसभा र १२ वटा प्रदेशसभाको सिट रहेको छ । प्रदेशसभा तर्फ ४ वटामा कांग्रेस, ७ वटा वाम गठबन्धन र एक स्थानमा संघीय समाजवादीले जित हासिल गरेको छ । निर्वाचन कार्यालयको घोषणा अनुसार मोरङ १ नम्बर क्षेत्रको दुवै प्रदेश सभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए । प्रदेश नम्बर...
झापाकाे १५ सिटमै वाम गठबन्धनकाे क्लिनस्विप, कसले कति मत पाए ?
लक्ष्मी काफ्ले झापा झापामा वाम गठवन्धनका उम्मेदवारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा क्लिनस्विप गरेका छन् । झापामा रहेको ५ वटा प्रतिनिधिसभा र १० वटा प्रदेशसभाको अन्तिम परिणमा आइसकेको छ । झापामा उम्मेदवारहरुले पाएको मत यस्तो छ : झापा क्षेत्र नम्बर १ को अन्तिम मतपरिणाम माओवादी केन्द्र (सुरेन्द्र कार्की)– ३६१७३ (विजयी) कांग्रेस (विश्वप्रकाश शर्मा)– ३३३१० खसेको...
रसुवामा समानुपातिकको मतगणना सकियो, कुन पार्टीले कति मत पाए ?
अनु आचार्य रसुवा, २४ मंसिर रसुवामा समानुपातिक तर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ भएको मतदानको मतगणना सम्पन्न भएको हो । सहायक निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलका अनुसार, समानुपातिकमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी मत एमालेले प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ७ हजार ८...
वामदेव गाैतम सांसद बन्नबाट बञ्चित : वाम गठबन्धनले गुमायाे दुर्इ ‘हेभिवेट’ नेता !
यज्ञप्रसाद सापकाेटा बर्दिया एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पराजित भएका छन् । उनी वाम गठवन्धनका तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार थिए । उनलार्इ कांग्रेसका संजय गौतमले पराजित गरेका हुन् । एमालेका तर्फबाट वाम गठबन्धनका प्रमूख सुत्रधार मानिने पूर्व उपप्रधानमन्त्री गौतम करिब ७ सय ४७ मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका हुन् ।...
बहालवाला मन्त्रीलाई भारी मतले हराउँदै छविलाल विश्वकर्मा विजयी
नयाँ पत्रिका रुपन्देही, २४ मंसिर रुपन्देही क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभामा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य छविलाल विश्वकर्मा विजयी भएका छन् । बहालवाला खानेपानी राज्यमन्त्रीसमेत रहेका लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार अब्दुल रज्जाकलाई ७ हजार ८ सय ६७ मतले पछि पार्दै छविलाल विश्वकर्मा विजयी भएका हुन् । वाम गठबन्दनका उमेद्वार विश्वकर्माले ३४ हजार ७ सय ५२ मत...
डडेल्धुरामा निकालियो देउवाकाे अनुपस्थितिमै विजय र्‍याली
करन ताम्राकार डडेल्धुरा डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि डडेल्धुरा जिल्लामा विजयी र्‍याली निकालिएको छ । देउवा प्रतिनिध सभा र डडेल्धुराका पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्ल प्रदेश (ख) मा निर्वाचित भएपछि डडेल्धुरा कांग्रेसले विजयी र्‍याली निकाली कोण सभा गरे । डडेल्धुराका सभापति एवं निर्वाचित (ख) उम्मेदवार कर्णबहादु मल्लले निर्वाचनका क्रममा कांग्रेसले गरेको...
उदयपुरकाे चुनावी भिडन्त रोचक माेडमा
जीवनाथ दाहाल उदयपुर पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता नारायण खड्का र एमाले नेतृ मञ्जुकुमारी चौधरीबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ । उदयपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना जारी रहँदा पछिल्लो अवस्थामा खड्का चौधरीभन्दा १६ मतले पछि छन् । एमालेकी चौधरीले १८ हजार ९२२ मत ल्याउदा डा. खड्काले खड्का १८९०६ मत पाएका छन्...
कैलाली ५ ‘ख’ मा कांग्रेसका पन्त विजयी
नयाँ पत्रिका कैलाली कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ ख मा कांग्रेसका उम्मेदवार डिल्लीराज पन्त विजयी भएका छन् । उनले प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका रमेश धामीलाई १७७१ मतअन्तरले पराजित गरेका हुन् । पन्तले कूल ११ हजार २ सय ५३ मत प्राप्त गरेका छन् ।